Xmod Update! ( 100% Working) ~ ဘလော့ခရီးသည်
Xmod Update! ( 100% Working)
Xmod ဆိုရင် Clash Of Clans ကစားတဲ့သူတိုင်း သိကြမှာပါ။ အချို့တွေမှာတော့ Updateတစ်ခါထွက်တိုင်း အဆင်မပြေတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီ Xmodလေးကတော့ 100%အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက် Updateလေးဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ အသုံးပြုဖို့အတွက် မိမိPhoneမှာ Rootရှိဖို့ လိုပါတယ်။ :D
Download Xmod From Media Fire => Mediafire Download Link
Download Xmod From Zippyshare => Zippyshare Link
Download Xmod From Solidfiles => Solidfiles Link
1. Xmod Apk ကို ဖွင့်လိုက်ပါ
2.Clash of Clans ပေါ်ကို နှိပ်ပါ။ (Lunch Button မဟုတ်ပါ)
3. MODသွင်းရန် အောက်က Install ကိုနှိပ်ပါ 4. Installလုပ်နေစဉ် ခဏစောင့်ဆိုင်းပါ
5. Installed Successful ပြရင် ထောင့်က ( X ) လေးကိုနှိပ်ပြီး ပိတ်လိုက်ပါ
6. ပြီးရင် Launch Button ကို နှိပ်ပြီး Clash Of Clans Gameထဲ ၀င်ပါ။ 7. ညာဘက်ထောင့်က စက်ရုပ်ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး Xmodကို ထပ်နှိပ်ပါ
8.အပေါ်ဆုံး Realtime Traps/Teslas ကနေ Sandbox From Replayအထိ Onပေးပါ။
9. Now! We can see Traps / Bomb. DONE!
Posted in: Android application, Android Games, Download